Spotify HiFi oo leh cod tayo leh oo CD ah si loo daah furo dabayaaqada sanadkan | Wararka IPhone
Spotify HiFi oo leh cod tayo leh oo CD ah si aad u bilowdo sanadkaan gudihiisa
Shirkadda Spotify ayaa toddobaadkan shaacisay inay yeelan doonto adeeg "dheeri ah" oo loo yaqaan Spotify HiFi. Magacaas, uma baahnid inaad ahaato Sherlock Holmes si aad u ogaato waxa ku saabsan oo dhan. Muusikada oo qulqulaya adigoon wax isku duubneyn, oo leh tayada maqalka oo ku keydsan CD.
Xaqiiqdii ogeysiiskani ma jeclaan doonin hoggaamiyeyaasha Apple Park, in yar oo jecel inay ku jiitaan tartanka. Waa dhibaato ay tahay inay soo ururiyaan. Caqli gal maaha in a Apple Music HiFi si aad ugu raaxeysato AirPods Max ...
Amazon iyo Tidal Iyagu waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee xayiraadda ka qaada oo ku soo bandhiga barnaamijyadooda socodka ikhtiyaar u ah inay dhageystaan ​​muusikada iyadoon lumin cadaadiska, sida kan lagu kaydiyay asalka asalka ah ee codka ah.
Spotify lagama tagi doono, waxaana todobaadkan uun lagu dhawaaqay in kahor dhamaadka sanadkan ay bilaabi doonto Spotify HiFi. Waxay noqon doontaa ikhtiyaar waxyar ka qaalisan kan hadda jira, laakiin leh cod aan la riixin, oo leh tayo wanaagsan iyo qeexitaan.
qarka u saaran uun baa dhajiyay. Waxa uu sheegay in shirkadda 'Spotify' ay tijaabineysay algorithms kala duwan sanado badan si ay awood ugu yeelato inay ku soo gudbiso codka internetka tayo sare leh. Waxayna u muuqataa inay ugu dambayntii heleen hab ay ku sameeyaan.
Goobta Tidal Waxay durba bilawday safarkooda si toos ah adeegooda ugu fidinaysa dhawaq aan tayo lahayn. Way ku faantaa waana dooddiisa inuu soo jiito macaamiisha. Waxay leedahay qiimo ah 9,99 Euros hal bil
Amazon sidoo kale waxay leedahay Amazon Music HD leh cod tayo sare leh. Waxay leedahay qiimo ah 14,99 Euros bishiiba, waxyar oo ka yar 9,99 Euros bishii oo adeeggu ku kaco iyadoo la adeegsanayo dhawaaqa "heerka" ah ee aan u baranay
Marka waa hubaal, Spotify HiFi waxay noqon doontaa adeeg waxyar ka qaalisan kan maanta naloo soo bandhigay. Ikhtiyaar ay kuwa doonaya inay dhageystaan ​​muusikada leh tayada ugu sareysa ee suurtogalka ah ay tixgelinayaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Spotify HiFi oo leh cod tayo leh oo CD ah si aad u bilowdo sanadkaan gudihiisa
Apple ayaa hogaamineysa Samsung dhanka iibinta taleefannada casriga ah
12x20 Podcast: Dhacdada Maarso ... Ama Maya